Ukunikezwa kwamandla okuguqukayo: ukuthi kuyini, kusebenza kanjani, kwenzelwa ini | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ukunikezwa kwamandla okuguqukayo: kuyini, kusebenza kanjani, kwenzelwa ini
Isaka | 14/09/2021 09:00 | Izingxenye ze-elekthronikhi
Enye yezinto eguquguquka kakhulu futhi edingekayo kunoma yisiphi isitudiyo se-elekthronikhi noma indawo yokusebenzela i ukunikezwa kwamandla okunganciphisi. Ngayo ungaphakela zonke izinhlobo zamasekethe, ukwazi ukusebenzisa izingqinamba ezahlukene namandla alawulwa kalula. Ngakho-ke ungakhohlwa ngabanye amabhethri noma ama-adaptha ethize wesifunda ngasinye.
Una amandla kagesi universal kuwo wonke amaphrojekthi akho. Ngaphezu kwalokho, ayisetshenziselwa ukunika amandla isifunda kuphela, ungasisebenzisa njengethuluzi lokuhlola, ngoba uzokwazi ukubona ukuthi ngabe qondanisa noma isifunda sisebenza kahle uma usithinta ngamathiphu ophenyo lwaso ...
1 Kuyini ukunikezwa kwamandla okunganciphisi?
1.1 Ungayikhetha kanjani ifonti enhle engancipha
2 Ukunikezwa kwamandla okungancipha okungcono
Kuyini ukunikezwa kwamandla okunganciphisi?
Uyini ugesi, nezimiso zokusebenza, sesivele siphawule ngale blog. Kodwa-ke, uma kukhulunywa nge ukunikezwa kwamandla okunganciphisi, Unokwehluka okuncane nokujwayelekile.
Ukunikezwa kwamandla kuyithuluzi elikwazi ukuhambisa amandla kagesi kusekethe noma entweni ethile. Yebo, lapho ukhuluma ngomthombo ongaxegiswa, ungukunye kuwo Izilinganiso zingashintshwa ngaphakathi kwebanga elithile, ngisho nemisinga. Ngakho-ke ngeke ube nokukhishwa okungaguquki kuka-3v3, 5v, 12v, njll.
Ungayikhetha kanjani ifonti enhle engancipha
Ukukhetha ukunikezwa kwamandla okunganciphisi okuhle, kufanele ubhekele izici ezimbalwa ezithi kufanele ucabangele. Ngakho-ke ungathenga umkhiqizo ohlangabezana kahle nezidingo zakho:
Ibhajethi: into yokuqala ukucacisa ukuthi ufuna ukusebenzisa imali engakanani ekunikezelweni kwamandla kagesi, ngoba ngale ndlela ungaya ebangeni elithile lamamodeli bese uqeda konke okungaphandle kwamathuba akho.
IzidingoInto elandelayo ukunquma ukuthi uzosebenzisela ini ukunikezela kwamandla okunciphisayo, uma kwenzelwa abenzi bezikhathi ezithile noma amaphrojekthi we-DIY, noma ngabe elebhu elisebenza kangcono, ukuze lisetshenziswe ngobuchwepheshe ku-workshop ye-elekthronikhi, njll. Lokhu kuzonquma nokuthi ngabe udinga okuthile okuthembekile futhi okubizayo, noma uma unganeliseka ngokulula.
I-Marca: kunemikhiqizo eminingi evelele ngaphezu kwayo yonke eminye. Kepha nawe akufanele ukhathazeke ngakho. Njalo, uma kungumkhiqizo owaziwa kakhulu, uzoba neziqinisekiso eziningi zekhwalithi nokusekelwa okungcono uma kwenzeka okuthile.
Izici zobuchwepheshe: Lokhu kungokomuntu siqu, futhi kuzoya ngokuthi yini oyifunayo. Kepha cabanga ukuthi uluphi uhla lwama voltages kanye nemisinga ovame ukuyidinga, ukulingana nalokho. Amandla asekelwayo (W) nawo azobaluleka.
Ukunikezwa kwamandla okungancipha okungcono
Uma ufuna ugesi omuhle ongacimeki, lapha ungabona amamodeli nemikhiqizo enconyiwe kakhulu:
I-PeakTech 1525: wumkhiqizo onokwethenjelwa futhi onamandla wokuphakelwa kwamandla kagesi. Le modeli ingahle isuke ku-1-16 volts wamanje oqondile, futhi isuke ku-0-40A ngamandla, yize kukhona amanye amamodeli abiza kakhulu angafika ku-60A. Inesikrini se-LED lapho ungafunda khona amandla wamanje namanani wamanje, kanye nesistimu yokupholisa ehlakaniphile usebenzisa amafeni, kanye nokusetha oku-3 okungenzeka kube khona.
I-Baugger Wanptek Nps1203W: enye yamamodeli amahle kakhulu womthombo ongaguquguqukayo, ngomthamo wokukhipha we-0-120v DC, kanye no-0-3A. Ngokukhonjiswa kwedijithali ukuze ukwazi ukubona ngokunembile amanani ahlinzekiwe, usayizi ohlangene, uphephile, futhi unezilawuli ezilula ezenziwe ngezandla.
COODEN Ukhiye: kungumbane olula oguquguqukayo olungele ukusetshenziswa kwasekhaya ngama-hobbyists kanye namalabhorethri, ngisho nezikhungo zemfundo. Kufaka phakathi ukubonisa kwedijithali ukubuka amanani wokunikezela, futhi kungalawulwa kusuka ku-0-30 volts naku-0-10 amps wamanje oqondile.
I-Uniroi DC: Lo mthombo uvumela ukulungiswa kusuka kuma-volts angu-0 kuye kwangama-32, nakusuka ku-0 kuye ku-10.2 amps. Ngokunemba okulungisekayo okungu-0.01v no-0.001A. Ngokubonisa okukhulu, okuhlangene kwe-LED, ukulawula ukushisa okuhlakaniphile, futhi kunokwethenjelwa kakhulu.
I-RockSeed RS305P: ugesi ongaguquguquki onamandla okulungisa we-0-30V, no-0-5A. Ngokuboniswa kwe-LED enamadijithi ama-4, ukusetha okuyi-6-set, amasethingi athuthukile, inkumbulo, kanye nekhono lokuxhuma kwi-PC ngekhebula le-USB ukusebenzisana nesoftware ehambelana neWindows kuphela.
IHanmatek HM305: ifonti efana neyangaphambilini, enosayizi ohlangene, olula futhi oshibhile. Kufaka isikrini se-LED ukubuka amanani wamanje nawamandla kagesi. Ivumela ukulungiswa okulula kwamandla phakathi kwe-0-30V nesikhathi samanje phakathi kuka-0-5A. Kukhona okunye okwehlukile okungakhuphukela ku-10A.
Kaiweets cc: le enye imodeli futhi iphakathi kokuhamba phambili, ngokunikezwa okuqondile kwamanje nangokucaca okukhulu kokulawulwa kokukhiphayo. Ingasuka ku-0 iye ku-30V futhi isuke ku-0 iye ku-10A. Iphinde ibe nokukhonjiswa kwe-LED kanye ne-5v / 2A port ye-USB yamandla.
I-EventekIngenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zamandla kagesi anciphayo laphaya, futhi intengo yayo iyakhanga impela. Le modeli ivumela ukulawulwa kusuka ku-0 kuye ku-30 ​​volts, naku-0 kuye ku-10 amps. Ngokuboniswa kwe-LED enkulu enamadijithi amane, usayizi ohlangene, onokwethenjelwa futhi ophephile, futhi kufakwe izintambo ze-alligator / ulayini wokuhlola.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » Ukunikezwa kwamandla okuguqukayo: kuyini, kusebenza kanjani, kwenzelwa ini
Njalo uFaraday: konke odinga ukukwazi ngokukhokhiswa kukagesi
I-Magnetic screw tray: ithuluzi elingaziwa nelisebenzayo